OtivTana: azo aloa tsikelikely ny vidin’ny entana Greengywatt | NewsMada
Mitsinjo ny mpanjifa rehetra ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny sampandraharaha amin’ny vola madinika, ny OtivTana, sy ny tranombarotra Tanatech, mpaninjara vokatra mandeha amin’ny herin’ny masoandro, marika Greengywatt. Azo atao, ankehitriny, ny mandoa tsikelikely ny vidin’entana maromaro (kits), ahazoana ny entana sy kojakoja marika Greengywatt ao amin’ny tranombarotra Tanatech, Greengywatt Behoririka.
Maro ny tombondahiny azon’ny mpanjifa. Tsy misy ny zanabola fa mitovy amin’ny vidiny ao amin’ny tranombarotra ihany. Tsy hakana sarany ny fikarakarana ny antontan-taratasy ary azo atao ny manatitra ny entana any amin’ny faritra tsirairay.
Enim-bolana hatramin’ny roa taona ny fe-potoana hanonerana tsikelikely ny vidin-javatra. Maromaro ny entana sy kojakoja ao anaty kit iray, mandeha amin’ny herin’ny masoandro, toy ny ampola roa sy famahana finday, televiziona, fanapihinan-jiro (interupteur), vata fampangatsiahana, sns.
Etsy ankilany, afaka misitraka ny tolotra rehetra omen’ny OtivTana ny mpanjifa, na ireo efa mpikambana, na ireo vao hirotsaka. Ao anatin’izany ny fitahirizana na findramam-bola, ny fanabeazana ara-bola, ny toloatra fahasalamana Harena, iantohan’ny OtivTana ny 70 hatramin’ny 80%-n’ny saram-pitsaboana, sns.